Esi sisiseko sokuxilonga ngaphandle kwamacingo kwi-Apple Watch Series 7 | IPhone iindaba
Esi sisiseko sokuxilonga ngaphandle kwamacingo kwi-Apple Watch Series 7
Ingelosi Gonzalez | 16/10/2021 16:43 | Apple Watch, Izaziso
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ukuba iiyunithi zokuqala ze-Apple Watch Series 7 zifikelele kumajelo eendaba. Kwaye ezinye abasebenzisikuvavanyo lwabo olunzulu, babeyibonile ukususwa kwenkxaso ebonakalayo yokuchonga izibuko iwotshi entsha yeApple. Endaweni yoko, ukuxilongwa okwenziwe kwiiVenkile zeApple kuya kwenziwa nge isiseko esitsha sokuqonda isifo esingenazingcingo esebenza ngokuhamba rhoqo kwe-60.5 GHz ngoku siyabona imifanekiso yokuqala yesi siseko, avuza ngearhente yonxibelelwano yaseBrazil.
I-Apple isebenzisa isiseko sokuxilonga ngaphandle kwamacingo ukuxhasa
Isiseko esitsha sokuqonda isifo seNew Apple Watch Series 7 sichazwe njengemodeli A2687. Kude kube ngoku, iiwotshi ezinkulu ze-Apple zifihle izibuko lenkxaso elidityaniswe kwiinkqubo ze-Apple kwiivenkile ezibonakalayo. Ngolu nxibelelwano, unokuseta isixhobo kwakhona, ufake kwakhona ii-watchOS, kwaye uhlalutye ngobuchwephesha into enokwenzeka kwisixhobo.
El I-Apple Watch Series 7 iyeka ukongeza le port ebonakalayo ukwenza indlela ye Ukuhanjiswa kwedatha ngaphandle kwamacingo. Olu tshintshelo lwenziwa ngale ndlela yokutshaja engenazingcingo esithetha ngayo. Isetyenziselwa umsebenzi wangaphakathi kuphela kwaye isebenza ngokuhamba rhoqo kwe-60,5 GHz.Isiseko sinamacandelo amabini njengoko ubona kumfanekiso ophambili wenqaku. Le mifanekiso ivuliwe AnatelInkampani yezonxibelelwano ebekwe eBrazil.
Icandelo elingezantsi liphethe isiseko sokutshaja ngetshaja yemagnethi kunye ne-USB-C port eya kuthi iqhagamshele kwiinkqubo zeBig Apple. Kwelinye icala, indawo ephezulu ivumela ukubekwa kwewotshi kwaye iyilungise. Unxibelelwano phakathi kwesiseko semagnethi kunye nebakaki ivumela enze zonke iintlobo zokuxilongwa kwezobuchwephesha kwiindawo ezikhuselekileyo kusetyenziswa iinkqubo ezenziwe yiApple, ezinje ngeevenkile ezibonakalayo okanye abantu abagunyazisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Esi sisiseko sokuxilonga ngaphandle kwamacingo kwi-Apple Watch Series 7
I-Monument Valley 2 ihlaziyiwe ukongeza umxholo omtsha
Itshaja yeMagSafe Duo ayihambelani nokutshaja okukhawulezayo kweApple Watch Series 7